Agụụ Ụgbọala Mercedes Benz. - Eastern Reporter
EJIJE NA ONYONYO IGBO
Agụụ Ụgbọala Mercedes Benz.
January 11, 2019 January 10, 2019 easternreporter	0 Comments
“Kedụ ihe mmere n’ụwa a, ihe ji a tụrụ m n’ọnụ? Ihe ọ bụla m tinyere aka ọ kpọchie. A rụọla m na kọmpany anọ, nke ise bụ na ụlọakụ, ebe m tinyere akwụkwọ sị na mụ a rụjuo. A na-apinye m ego kobo kobo.
Ha enweghị ike ị mata n’ahụ m chọrọ ego. M were sị ka m dewe ego m, were ya zụọ ahịa, a zụpụtakwanụ gịnị? Lekene Okey, na John na Obi. Ndị a niile bụ ndị mụ na ha bidoro ahịa. Ọ kwa ya ka m nụrụ na ha jikọrọ aka ọnụ wee zụọ “Mercedes Benz” n’isi n’isi.
Ị nweta ụlọ ebe ụmụ nwoke a bi, elelebe eje ọrụ. Ị nwe ọgbakọ kpọọ ha ka ha ghaa ego; ha kpọọ aha ego, ọ na-ada puku kwuru puku, ijeri kwuru ijeri.
Ka m jụkene chi m ajụjụ. Chi m a pụtara m ụwa ahụhụ?
Cheere o! ọ mmadụ na-eme m ihe a ka ọ bụ otu akala aka m sị dị?”
Onye ọ bụla lerere ihe nkiri a matara na-ọbụ ọgwụ ego ka o tinyere aka n’ikpeazu, bụ nke na-ewu ewu n’oge ahụ. N’ezie, ihe ọjọọ a lọghachila azụ n’ụdị ọzọ. Maka o nweghị ihe dị ọhụrụ n’okpuru anyanwụ.
Akụkọ karịrị ugbu a maka otu ụmụ okorobịa si etinye aka ha n’ihe ọjọọ maka ha chọrọ ị gbaa ụgbọala “Mercedes Benz.” Mmasị i nwee ụgbọala a abụghị ihe ọhụrụ n’ụwa a. Mana kedụ ka ọ ga-adi na ị nwere ụwa niile, ma mkpụrụ obi gị efunarị gị?
Eleghị anya ọ bụrụ n’ihe ụwa na-esiri gị ike, ma biko, ekwela ka o duga gị ị kpaa ego n’ụzọ ezighị ezi. Chetakwa na o nweghị ihe na-adịgide, maka o tee aka o ji dị njọ, e mesịa ọ ga-adị mma.
Kama ị richaa dachie ụzọ, ka mburu ọnụ! Daalụnụ ụmụIgbo!
← ‘Make an extra effort to report actual, reliable information and avoid fake news stories’ – President Buhari tells Nigerian media
‘I built the name Plantashun Boiz, but 2face didn’t want Faze to join’ – Blackface continues his attack on 2face Idibia →